ငါရို့ တိုင်းပြည်ကို ဇာပိုင် တည်ဆောက်ကတ်ဖို့လဲ? (၁) | Great Arakan
Home Education ငါရို့ တိုင်းပြည်ကို ဇာပိုင် တည်ဆောက်ကတ်ဖို့လဲ? (၁)
အယင်တကြိုင်းက လန်ဒန် မြေအောက်ရထား စီးဖြစ်ယင်း၊ ဘူတာတိမှာ ရထားတန်းခါး ဖွင့်ပိတ် ကြာရေအချိန်ကို ရွီကြည့်မိရေ။ တန်းခါး စလို့ ဖွင့်စွာကနီ လုံးဝ ပိတ်လားရေအထိ စုစုပေါင်း ကြာချိန်က ၁၀ စက္ကန့် တတိ။ ရထားထက်က ဆင်းရေ ခရီးသယ်တိ နန့် ပြန်တက်တေ ခရီးသယ်အတွက် စုစုပေါင်း ရရေ အချိန်က ၈ စက္ကန့်။ အေဟင့်ကို ကြည့်ပနာ၊ ငါရို့ဘားက ခရီးသယ်တိ အေအချိန်လောက်နန့်ဆို ရထားထက်ကို ဇာနှစ်ယောက်လောက် ရောက်နိုင်ကတ်ဖို့လဲချင့်လို့ ဆက်စပ်စဉ်းစားမိရေ။
လူ့ဘဝဆိုစွာ အချိန်ရာဖြစ်တေအတွက် ကဗာကြီး တိုးတက်မှု အားလုံးစွာ အချိန်ကို အခြေခံထားရေ။ ကင်ပြုတာ၊ ဖုန်း၊ အိန်တာနတ် အစရှိရေ နည်းပညာ အားလုံး အခြေခံစွာ အချိန် အတိုဆုံးမှာ အမြင့်ဆုံး ထုတ်လုပ်မှုကို ရဖို့အတွက် ဖြစ်တေ။ တိုးတက်တေ နိုင်ငံကြီးတိ သူ့ထက်ငါ သာအောင် စဉ်ဆက်မပြတ် ပြိုင်ဆိုင်ကြိုးစားနီကတ်စွာမှာ အခြေခံလည်း အချိန်ရာ ဖြစ်တေ။ အလုပ် တခုဗြီးကေ နောက်တခု ဆက်လုပ်ရဖို့။ ငေးနီလို့ မရ၊ တွေဝေနီလို့ မရ။ တခုခုကို မြင်လိုက်စွာနန့် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာ နားလည်ဆုံးဖြတ်ပြီးသား ဖြစ်ပနာ လုပ်ကိုင်ဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နီရဖို့။
အေပိုင် ဘဝ(အချိန်)ကို နားလည်ပနာ၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု မြင့်ဗျာလ်၊ အရာရာအတွက် အဆင်သင့် ဖြစ်နီကတ်တေ လူမျိုးတမျိုးကို ငါရို့ ဇာပိုင် ဖန်တီးကတ်ဖို့လဲ?
အခြေခံ အကျဆုံးနန့် ပထမဆုံး လုပ်ရဖို့ အလုပ်က ပညာရေး။ အေလူတိကို ဖန်တီးဖို့အတွက်၊ ညအခါ လသာသာ၊ အလောင်းဘုရား၊ ဘုရင့်နောင် အစရှိရေ လူ့ဘဝမှာ တခုလည်း အသုံးမတည့်ရေ သင်ခန်းစာတိနန့် လူ့အသိဉာဏ်ကို ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ ပညာရေးမျိုးကို တည်ဆောက်လို့ မရနိုင်။
အယင်ဆုံး ပညာရေး သုတေသန အဖွဲ့အစည်း တခု တည်ထောင်ရဖို့။ အင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံ ရှိရေ လူ ၅၀ လောက်နန့် စရဖို့။ ယင်းလူတိစွာ ၁ ရက်ကို အနည်းဆုံး အချိန် ၈ နာရီ သုတေသန လုပ်ကတ်ရဖို့။ ယင်းလူတိအတွက် စားသောက်နီထိုင်ဖို့ မပူပင်ရရေ လစာကို ပီးရဖို့။ လေ့လာအား ကောင်းပနာ၊ သုံးသပ်၊ ဆွေးနွေး၊ တင်ပြတတ်တေ လူတိ ဖြစ်လာအောင် လေ့ကျင့်လားကတ်ရဖို့။
ပထမဆုံး နှစ် လုပ်ရဖို့ သုတေသနက မူကြို ပညာရေး။ တကဗာလုံးမှာ အတော်ဆုံး နိုင်ငံကြီးတိက မူကြိုပညာရေး သင်ခန်းစာတိ၊ အခြေခံ အတွေးအခေါ်တိကို စုစည်းလားရဖို့။ အဗြီးကေ ကိုယ့်ဒေသ၊ ကိုယ့်ဓလေ့ထုံးတမ်းနန့် ကိုက်ညီဖို့ မူကြိုပညာရေးကို ထုတ်နှုတ်ပြဌာန်းရဖို့။ ဥပမာ – အင်္ဂလန်က မူကြိုတန်းအများစုမှာ ABCD ကို မသင်။ ပထမဆုံး “Your body is only yours” “မင်း ခန္ဓာကို မင်းတယောက်တည်းရာ ပိုင်ရေ” ဆိုရေ ယင်းသူရို့ လူ့အဖွဲ့အစည်း အယူအဆ အခြေခံသဘောတရားကို နားလည်အောင် သင်ပီးရေ။ “ကိုယ့်ခန္ဓာမှာ နာကြင်ရေ ဝေဒနာကို အပြင်လူ တယောက်လည်း ဝီမျှယူလို့ မရနိုင်။ ကိုယ်ဖြစ်ကေ ကိုယ်ရာ ခံရဖို့။ ကိုယ့်ခန္ဓာကို ကိုယ်တယောက်တည်းကရာ တာဝန်ယူရဖို့။ ကိုယ်ကရာ ဂရုစိုက် စောင့်ရှောက်ရဖို့။ ကိုယ့် ဦးနှောက်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင် အပြင်လူက ထည့်ပီးလို့ မရနိုင်။ ကိုယ့်စွာကိုယ်ရာ လေ့လာရဖို့။ ကြိုးစားအားထုတ်ရဖို့” ဆိုရေ “အပြင်လူကို အမှီအခိုကင်းပနာ ကိုယ့်စွာကိုယ် သီးသန့် ရပ်တည်တတ်အောင်” အခြေခံအတွေးအခေါ်ကို ဂရုတစိုက် သင်ပီးရေ။
သုတေသန လုပ်တေ လူတိ အချိန်ပီးပနာ ဂရုတစိုက် လေ့လာသုံးသပ်ဆွေးနွေးကတ်ကေ ၁ နှစ်အတွင်းမှာ မူကြိုပြဌာန်းချက် စာအုပ်နန့် နောက်ဆုံး ကဗာကြီး ဦးတည်လားနီရေ အခြေခံသဘောတရား အတွေးအခေါ်ပိုင်းကို ရလာနိုင်ရေ။ ပြဌာန်းချက် ရလာကေ၊ ဆရာဆရာမတိကို သင်ပီးဖို့ ဆရာဆရာမ ၁၀၀ လောက်ကို အယင်ဆုံး နားလည်သဘောပေါက်အောင် လေ့ကျင့်သင်ကြားပီးရဖို့။ ယင်းဆရာဆရာမတိက ထပ်ဆင့် အချေတိနန့် တိုက်ရိုက်ထိတွိဖို့ ဆရာဆရာမတိကို ထပ်သင်ပီးလားဖို့ဆိုကေ ၂ နှစ်အတွင်းမှာ ရခိုင်ပြည် မူကြိုပညာရေးစနစ် ကဗာကြီးနန့် ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ရေ အဆင့်ကို လုံးဝ ပြောင်းလဲလားဖို့။
သုတေသန လုပ်တေ လူတိက မူကြိုပြဌာန်းချက် လုပ်ပြီးစွာနန့်၊ မူကြိုအချေတိ ၁ တန်း တက်ချိန် အမှီ၊ ၁ တန်း ပြဌာန်းချက်ကို အထက်က ပုံစံအတိုင်း ဆက်လုပ်လားရဖို့။ အဗြီးကေ ၂ တန်း၊ ၃ တန်း၊ အစရှိပနာ၊ တက္ကသိုလ်အဆင့်ဆင့်အထိ ဆက်လုပ်လားကတ်ဖို့ဆိုကေ နှစ် ၂၀ အကြာမှာ ငါရို့ပညာရေး ကဗာ့ အဆင့်အတန်းကို ရောက်လားဖို့။ ပြဌာန်းချက်တိုင်းကို နှစ်တိုင်း ပြန်သုံးသပ်ပနာ၊ ၃ နှစ်တိုင်း ပြန်မြှင့်တင်ပီးလားကတ်ရဖို့။ အေပိုင် လုပ်လားနိုင်ကေ ငါရို့ လူမျိုးတိ ကဗာကြီးနန့် စဉ်ဆက်မပြတ်​ ရင်ဘောင်တန်း လိုက်လာနိုင်ဖို့။
အထက်က သဘောတရားက လူအများကြီးကို အပြောင်းအလဲ လုပ်လို့ ရနိုင်ရေ သဘောတရားတခုကို စဉ်းစားတွေးခေါ်စွာမှာ အထောက်အကူပြုဖို့ ပြောပြစွာရာ။ အေအတိုင်း လုပ်လားရဖို့လို့ မဆိုလို။ အေထက် ကောင်းရေ သဘောတရားတိ၊ နည်းလမ်းတိ အများကြီး ရှိဖို့။ လူအများကြီး၊ ဖေသာအများကြီး စိုက်နိုင်ကေ၊ အေထက် အချိန် ပို တိုပနာ၊ ပို ကောင်းအောင် လုပ်လို့ ရနိုင်ရေ နည်းလမ်းတိလည်း ရှိဖို့။
အေလောက်ဆိုကေတော့ခါ တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ဖို့အတွက် လူအများကြီးကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် စနစ်ကျရေ အခြေခံ တွေးပုံတွေးနည်း နမူနာတခုကို အစပြုစဉ်းစားတတ်လာကတ်ဖို့ မျှော်လင့်မိပါယင့်။
နောက် အချိန်ရခါ တိုင်းပြည်စီးပွားရေးအတွက် အထောက်အကူပြု စဉ်းစားသင့်စွာတိကို တင်ပြပီးပါမေ။
Previous articleကိုဗဲ့ဒ်-၁၉ ဖြစ်ကေ အိမ်မှာ ဇာပိုင် ပြုစုရဖို့လဲ?
Next articleငါရို့ တိုင်းပြည်ကို ဇာပိုင် တည်ဆောက်ကတ်ဖို့လဲ? (၂)